Soo dejisan Adobe AIR 23.0.0.257 – Windows – Vessoft
Adobe AIR – software ah in uu ordo codsiyada la taageero u farsamooyinka kala duwan ee loo baahan yahay in la geeyo ee web-codsiyada. software The kuu ogolaanayaa inaad geeyo codsiyada oo aan la xiriira xadeynta la xidhiidha isticmaalka daalacashada. Adobe AIR taageertaa codsiyada badan, oo ay ku jiraan audio iyo ciyaartoyda video, kulan, qalab in la kordhiyo wax soo saarka, iwm Sidoo kale apps AIR Adobe u shaqayn karaa iyada oo aan la xiriira internet by diraya xogta la ururiyey intii lagu jiray geedi socodka shaqada la joogo ee la xidhiidha internetka.
Taageerada isticmaalka daaqadaha badan
Access codsiyada nidaamka file iyo sabuurad
English, Français, Español, Deutsch... .NET Framework 4.6.81 iyo 4
Extensions set ee qaybaha oo lagama maarmaan u ah hawlgalada codsiga software iyo web ku salaysan naqshadaha .net ah. software The taageera luqadaha barnaamijyada kala duwan.